Maamulka OYSU A-Xasa oo kulan aad muhiim u ah isugu yimid farxadna ku soo gabagabeeyay.
Nov 30, 2012 (QOL)Waxaa shir isugu yimid Ururka Midowga Dalinyarta iyo Ardayda Ogadenia ( OYSU )faraca dalka Saudi Arabia gudidiiisa fulinta, shirkaas oo ka dhacay Magaalada Al-Xasa waxay u jeeedadiisu ahayid sida loodardargalin lahaa hawlaha OYSU Saudi Arabia ee lagu taageero.
Maamulka OYSU Saudi Arabia waxay kulankoodaas kaga hadleen arimofarobadan oo guudahaan hawlaha halganka xaqa ah lagu taageerayo, kulnakaas awxaa kagaga dooday habkaugu sahlan ee lagu gudbin akroafkaarta OYSU lagagana dhaadhicin karo guud ahaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalida Ogadenia ooay dhalin yartu ugu horeyso.
Sirka waxaa ka qayb galay xooghayaha OYSU ee dalka Saudi Arabia Mudane Cabdiraxman Sacuudi oo aad uga hadlay dhibaatooyinka Ogadenia ka dhacaya xadgudubka dadka aan waxba galabsanin lagu hayo, dhamaan xubnihii ka hadleen xadgudubyadaa aan looadkaysan Karin ee sida aan kalajoogsiga lahayn bushadaOgadenia qaybaheeda kala duwan loola beegsado.
Ururka OYSU dalka Saudi Arabia waxay balan qaadeen in ay shacabkooda hiil aan hagarlahayn lagarab taagnaan doonaan sidoo kalena aysan ogalaan doonin wax shacabka Ogadenia sharaftiisa & karaamadiisaa wax loogu dhimayo.
Ugu dambaynti Maamulka OYSU Al-Xasa, Saudi Arabia gwaxay adjisteen qorshecusub oo ay ku shaqayn doonaan kaas oo lagu dardar galin doono habsamiu socodka hawlaha hor yaala laguna kobcin doono waxqabadka OUYSU Saudi Arabia.
Masúuliyiinta OYSU Sacudi Arabia ookulankiiay yeeshee guulkagaadhay ayaa hadaladoodii ku soogaba gabeeyay waxaaanu shacabka Ogadenia u rajaynayaa guul iyo gobanimo, waxaau u balan qaadaynaan guud ahaan shacabka Ogadenia gaar ahaan dadweynaha Ogadenia ee Dalka Saudiga Ku dhaqaan in aanu marwalba danahoodaka shaqayn doono kana farxin doono.
Waxa nalagala soo xidhidhi kara Email-kan oysu.ksa@hotmail.com
OYSU Al-Xasa, Saudi Arabia